कोरोना भाइरस विशेष : माछा मा’सु खा’नु कत्तिको जोखिम छ ? – Life Nepali
कोरोना भाइरस विशेष : माछा मा’सु खा’नु कत्तिको जोखिम छ ?
काठमाडौ । कोरोनाभाइरसबाट संक्रमण एक जना १९ वर्षीय महिलाको अहिले टेकु अस्पतालमा उपचार चलिरहेको छ भने देश आजबाट लकडाउनको अवस्था छ । कोरोना भा’इरसको संक्र’मण फैलनबाट रो’क्न सरकारले एक’ हप्ताको’ लागि लकडाउन गरेको छ । यहि लकडाउनको’ अवस्थामा धेरै मानिसहरुमा विभिन्न जिज्ञासाहरु उब्जिरहेको पाइन्छ ।
माछा मा’सु खाने कि नखाने भन्ने विषय पनि अहिले बहस’ ‘बनेको छ । माछा मासुबाट कोरोनाभाइरस सर्ने तर्कले गर्दा अहिले माछा मा’सुको सेवन कम’ भएको’ पाइएको छ । खास सत्यता के हो’ भन्ने बुझ्न खोज्दा’ बीबीसीमा प्रकाशित एक लेखमा एपोलो अस्पतालका डाक्टर’ लक्ष्मण देसाईका अनुसार’ माछा मासु मात्र होइन तरकारीहरु समेत’ सुरक्षित’ छैन, यदि राम्रोसँग पकाएन भने । डा देसाईले’ भनेका छन्, “कोरोना भाइरसलाई जीवित’ रहन माध्यम चाहिन्छ’ र त्यो खाने कुरामा’ रहन सक्दैन ।
कोरोना’ भाइरस, संक्रमित’ व्यक्तिले खोक्दा, वा नजिकिंदा’ सर्ने गर्छ । तर माछा मासु किन्दा’ पन्जा’ लाउने र मास्क’ लाउनु जरुरी हुन्छ र मा’सुलाई कम्तिमा ३० मिनेट पकाउन’ चाहि पर्छ’ जसले गर्दा मा’सुमा भ’एका किटाणु’ मर्छन् ।” मा’सुबाट भा’इरस सरेको’ अहिलेसम्म’ पुष्टि नभएको कारण मासु खाँदा जाेखिम हुन्छ’ भन्ने तर्क’ ग’लत हो भन्ने तर्क’ बीबीसीले प्रस्तुत गरेको छ । मा’सुसँगै तरकारीहरु समेत’ राम्रोसँग पखाल्नेदेखि’ राम्रोसँग पकाएर’ खान समेत उल्लेख गरिएको छ ।
Previous नेपालमा थप १ जना कोरोना संक्रमित फेला, अहिलेसम्म तीनजना पुग्यो
Next राजधानी बाहिर पहिलो कोरोना संक्रमित धनगढीमा भेटियो